You are here: Home somal TACSI
Waxaa maanta geeriyooday macalinkaygii kubada cagta (Cabdiridaaq Axmed Ismacil ) inalilaahu wa inaa ilayhi raajicuun
Hargeisa, Khamiis 10/11/2016, Galinkii danbe waxa geeri naxdin lehi ku timid walaalkeen Cabdirisaq, Waxaan halkan Tacsi halkan uga diraynaa dhamaan Ehel,Qaraabo iyo Asxaabii oo dhan ee uu ka baxay Marxuun. Macalin Cabdirsaq Axmed Ismail.
Alle ha u naxariis waxaa manta oo jimce ah lagu aasay xabaalaha Naaso Hablood ee Galbeedka Hargeisa.
Alle ha u naxariisto: Marxuunku waxa uu ahaa Maclikayagaa Kubada cagta Kooxdayadii NPP wakhtigaas oo uu kooxda gacanta ku hayay aqoon iyo cilmi dheerad ahna u lahaa Ciyaraha iyo shuruucdooda.
Waxa kale oo uu ahaa masuuliyiinta wax laga waydiiyo dhanka ciyaaraha, Ciyaaraha Gobolada ee 2016 ee Somaliland waxa uu ka tirsanaa gudidii dacwadaha.